Soo-saareyaasha Alaabooyinka Waxbaridda Ilkaha - Shiinaha Warshado & Alaab-qeybiyeyaal Ilkaha Shiinaha
Nidaamka Fiidiyowga ee Waxbarista Dijital ah ee Ilkaha
Naqshad xirfadeed loogu talagalay Waxbarashada Barista Ilkaha ama Daaweynta
Naqshadeynta kumbuyuutarka qarsoon, oo sahlan in laga laabto, ma fadhiyo goobta caafimaad.
Video iyo maqal ah gudbinta waqtiga-dhabta ah.
Soo bandhigida laba-geesoodka ah waxay siisaa dhakhaatiirta iyo kalkaaliyayaasha kala duwan ee qalliinnada kala duwan iyo xaglo kala duwan, kuwaas oo ka welwelsan habka geeddi-socodka wax-barashada.
Nidaamka ururinta fiidiyowga xirfadlaha ah ee caafimaadka, soosaarka fiidiyowga 1080P HD, 30 zoom optical, wuxuu bixiyaa sawirro fiidiyow yar yar oo loogu talagalay barashada bukaan socodka.
Tijaabiyaha jilitaanka ilkaha ee waxbarista tayo sare leh ee tababarka tababarka ilkaha JPS-FT-III
Nidaamka jilitaanka barashada ilkaha ee JPS FT-III waxaa loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah waxbarista ilkaha ee JPS Dental.
Ugu dambeyntii waxay ku dayanaysaa qalliinka dhabta ah ee daaweynta si ardayda ilkaha iyo shaqaalaha caafimaadku u horumarin karaan qaabsocod qalliin oo sax ah iyo khalkhalgelinta ka hor qalliinka iyo sameynta isbeddelka habboon ee daaweynta daaweynta dhabta ah.
Jilitaanka barashada ilkaha waxay ku habboon tahay jaamacadda ilkaha iyo xarunta tababarka ilkaha.
Qalabka Shaybaarka Ilkaha Hal Doob Workbench JM-52
Noocan ah xarunta ilkaha ayaa si balaaran u qaata talobixinta farsamayaqaanada ilkaha ee caanka ah labadaba gudaha iyo dibada. Waxyaabaha ugu muhiimsan waxay ka kooban yihiin shaabad qabow, dufanka aluminiumka dhinta iyo xoqida. Iyadoo loo marayo naqshadeynta qaabeynta 3D, iyo mashiinka goynta leysarka, CNC oo laabaya Mashiinka, mashiinka alxanka otomaatiga ah iyo qalabka kale ee casriga ah ee saxda ah. Qalabka dusha sare waxaa lagu samayn karaa iyada oo la tuurayo sabuuradda dabka badan, ama birta aan lahayn, ama marmar ay dadku sameeyeen
Nooca Dhaqaalaha Qabille ee Waxbarista Ilkaha JM-580
Iftiinka aan shidnayn ee qabow 1set
Shirka kursiga ilkaha ee jilitaanka 1unit
Nidaamka sifeynta biyaha 1set
3-way siliinge 1pc
Saxarada ilkaha 1pc
Qalabka Shaybaarka Ilkaha Hal Workbench Ilkaha JW-53 (1.2M)
Qalabka Shaybaarka Ilkaha Hal Workbench Ilkaha JW-54 (1.4M)
Qalabka Shaybaarka Ilkaha Qalabka Shaqada Ilkaha ee JW-55 (1.6M)
Qalabka Shaybaarka Ilkaha Qalabka Shaqada Ilkaha JW-56 (1.8M)